Why urinary tract infection is more common in females than males? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Why urinary tract infection is more common in females than males?
အမြိုးသမီးတှမှော ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတာ ဘာလို့ပိုဖွဈလဲ
ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတယျဆိုတာ အမြိုးသား၊ အမြိုးသမီးမရှေးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အမြိုးသမီးတှမှောပိုပွီးအဖွဈမြားတာကိုတှကွေ့ရပါတယျ။ ဖွဈတဲ့ရောဂါခငျြးတူပမေယျ့ အမြိုးသမီးတှမှောမှ ပိုပွီးဖွဈစနေိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာတှရှေိပါတယျ။ ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတယျဆိုတာ ကြောကျကပျ၊ ဆီးပွှနျ၊ ဆီးအိမျ စတာတှအေကုနျရောဂါပိုးဝငျပွီး ဖြားတာ၊ နာကငျြကိုကျခဲတာတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။
ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျပွီဆိုရငျ ဆီးပူ၊ ဆီးကဉျြဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဆီးအောငျ့တာ၊ ဆီးအရောငျမကောငျးတာ၊ စတာတှနေဲ့လညျး ရောဂါလက်ခဏာပွနိုငျပါတယျ။ ဆီးခဏခဏသှားတာ၊ ဆီးမထိနျးနိုငျတာတှနေဲ့လညျး လာတတျပါတယျ။ ဆီးစပျကနာတာ၊ ဗိုကျအောငျ့တာ၊ ဆီးအနံ့ဆိုးဆိုးတှထှေကျနရေငျလညျး ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျနပွေီလားလို့ စဉျးစားရပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှမှောဘာလို့ပွိုဖဈရသလဲဆိုတာကို အဖွရှောကွညျရ့ငျတော့ ခန်ဓာကိုယျဖှဲ့စညျးပုံကွောငျ့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အမြိုးသမီးတှရေဲ့ဆီးပွှနျဟာ အမြိုးသားတှထေကျ ပိုပွီးတိုပါတယျ။ ပိုပွီးတိုတဲ့အတှကျကွောငျ့ ရောဂါပိုးတှဟော ဆီးအိမျထဲကိုအခြိနျတိုတိုနဲ့ မွနျမွနျဆနျဆနျရောကျနိုငျပါတယျ။ ဒီအကွောငျးကွောငျ့လညျး အမြိုးသမီးတှကေပိုပွီးအဖွဈမြားကွပါတယျ။
နောကျထပျအကွောငျးရငျးတဈခုကတော့ အမြိုးသားအမြိုးသမီးရယျလို့ မခှဲခွားထားတဲ့ အကွောငျးတဈခုပါ။ အတူနအေဖျောတဈဦးထကျမကရှိတာကလညျး ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျတာကိုပိုဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အတူနအေဖျောတဈဦးရဲ့ရောဂါပိုးက အမြိုးသားအမြိုးသမီးမရှေးကူးစကျစနေိုငျသလို မိမိကနတေဈဆငျ့ နောကျထပျအဖျောတဈဦးကိုကူးစကျစနေိုငျပါတယျ။
နောကျပွီး diaphragmလို့ ချေါတဲ့ ကိုယျဝနျတားပစ်စညျးအသုံးပွုတဲ့ အမြိုးသမီးတှမှောလညျး ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျဝနျတားဆေးတှမှော သုကျပိုးကိုနှောငျ့ယှကျနိုငျတဲ့ဆေးတှသေုံးစှဲရငျလညျး ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျနိုငျပါတယျ။ သှေးဆုံးပွီးခြိနျမှာ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာလညျပတျနတေဲ့ oestrogenပမာဏလြော့နညျးလာပါတယျ။ oestrogenလြော့နညျးလာတာနဲ့အမြှ ဆီးလမျးကွောငျးမှာအပွောငျးအလဲ တှဖွေဈပျေါပွီးပိုးဝငျစနေိုငျပါတယျ။
အခွားအဖွဈနညျးတဲ့အကွောငျးရငျးတှအေနနေဲ့တော့ ဆီးလမျးကွောငျးမှာမှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြတှရှေိနတော၊ ဆီးလမျးကွောငျးမှာကြောကျတညျတာ၊ ကငျဆာလိုအကွိတျကဆီးလမျးကွောငျးကိုဖိထားလို့ ဆီးလမျးကွောငျးပိတျရာကတဈဆငျ့ ပိုးဝငျတာတှကေလညျးကွုံတှရေ့ပါတယျ။
ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျပွီဆိုရငျတော့ ထိရောကျတဲ့ကုသမှုခံယူရမှာဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသားတှကေော အမြိုးသမီးတှမှောပါရောဂါဖွဈပှားပွီးမကုသဘဲထားမိရငျ အသကျပါထိခိုကျနိုငျပါတယျ။ အသကျအန်တရာယျမရှိရငျတောငျ ကွီးမားတဲ့နောကျဆကျတှဲအခွအေနတှေရှေိနိုငျတာကွောငျ့ ဂရုစိုကျပွီးကုသသငျ့ပါတယျ။
အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ ဘာလို့ပိုဖြစ်လဲ
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေမှာပိုပြီးအဖြစ်များတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ ဖြစ်တဲ့ရောဂါချင်းတူပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေမှာမှ ပိုပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တယ်ဆိုတာ ကျောက်ကပ်၊ ဆီးပြွန်၊ ဆီးအိမ် စတာတွေအကုန်ရောဂါပိုးဝင်ပြီး ဖျားတာ၊ နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ပြီဆိုရင် ဆီးပူ၊ ဆီးကျဉ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီးအောင့်တာ၊ ဆီးအရောင်မကောင်းတာ၊ စတာတွေနဲ့လည်း ရောဂါလက္ခဏာပြနိုင်ပါတယ်။ ဆီးခဏခဏသွားတာ၊ ဆီးမထိန်းနိုင်တာတွေနဲ့လည်း လာတတ်ပါတယ်။ ဆီးစပ်ကနာတာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ၊ ဆီးအနံ့ဆိုးဆိုးတွေထွက်နေရင်လည်း ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နေပြီလားလို့ စဉ်းစားရပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာဘာလို့ပြိုဖစ်ရသလဲဆိုတာကို အဖြေရှာကြည်ရ့င်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆီးပြွန်ဟာ အမျိုးသားတွေထက် ပိုပြီးတိုပါတယ်။ ပိုပြီးတိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ရောဂါပိုးတွေဟာ ဆီးအိမ်ထဲကိုအချိန်တိုတိုနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်လည်း အမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးအဖြစ်များကြပါတယ်။
နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ အမျိုးသားအမျိုးသမီးရယ်လို့ မခွဲခြားထားတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုပါ။ အတူနေအဖော်တစ်ဦးထက်မကရှိတာကလည်း ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာကိုပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အတူနေအဖော်တစ်ဦးရဲ့ရောဂါပိုးက အမျိုးသားအမျိုးသမီးမရွေးကူးစက်စေနိုင်သလို မိမိကနေတစ်ဆင့် နောက်ထပ်အဖော်တစ်ဦးကိုကူးစက်စေနိုင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး diaphragmလို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ဝန်တားပစ္စည်းအသုံးပြုတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေမှာ သုက်ပိုးကိုနှောင့်ယှက်နိုင်တဲ့ဆေးတွေသုံးစွဲရင်လည်း ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်။ သွေးဆုံးပြီးချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်ပတ်နေတဲ့ oestrogenပမာဏလျော့နည်းလာပါတယ်။ oestrogenလျော့နည်းလာတာနဲ့အမျှ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာအပြောင်းအလဲ တွေဖြစ်ပေါ်ပြီးပိုးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။
အခြားအဖြစ်နည်းတဲ့အကြောင်းရင်းတွေအနေနဲ့တော့ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာမွေးရာပါချို့ယွင်းချက်တွေရှိနေတာ၊ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာကျောက်တည်တာ၊ ကင်ဆာလိုအကြိတ်ကဆီးလမ်းကြောင်းကိုဖိထားလို့ ဆီးလမ်းကြောင်းပိတ်ရာကတစ်ဆင့် ပိုးဝင်တာတွေကလည်းကြုံတွေ့ရပါတယ်။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ပြီဆိုရင်တော့ ထိရောက်တဲ့ကုသမှုခံယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေကော အမျိုးသမီးတွေမှာပါရောဂါဖြစ်ပွားပြီးမကုသဘဲထားမိရင် အသက်ပါထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ အသက်အန္တရာယ်မရှိရင်တောင် ကြီးမားတဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေတွေရှိနိုင်တာကြောင့် ဂရုစိုက်ပြီးကုသသင့်ပါတယ်။
Acute post streptococcal glomerulonephiritis